FAMPAHALALANA SY SARY MITERAKA ALIKA BLOODHOUND - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika Bloodhound
Lisitry ny Doghound Mix Dogs
Ny Bloodhound dia alika goavambe mahery vaika. Ny lamosina dia matanjaka be ho an'ny haben'ny alika. Ny loha dia lava sy tery raha oharina amin'ny halavan'ny alika ary lava mitovy amin'ny vatana. Ny halavany dia lava ary mainty ny orona. Ny masony rendrika lalina dia misy endrika diamondra noho ny sarony ambany nitaritarika azy ireo ary nivadika ho saron'ny sarony mavesatra ambony. Ny loko dia miovaova manomboka amin'ny hazelavo lalina ka hatramin'ny mavo. Ny sofina manify sy malefaka ary milentika dia ambany sy lava be. Ny Bloodhound dia manana hoditra mihoampampana sy ketrona mihantona tsy mihontsina loatra, mainka fa ny lohany sy ny hatony izay ahantona ao anaty valan-tsitroka lalina. Tena tononina ny dewlap. Ny tongotra hozatra, eo anoloana dia mahitsy. Ny rambony dia entina avo miaraka amin'ny fiolahana kely eo ambonin'ny topline any aoriana. Ny vala ny hoditra dia manampy ny alika hitazona fofona manitra eo am-panarahana azy. Ny palitao dia ketrona, fohy ary somary matevina amin'ny endriny, miaraka amin'ny volo malefaka kokoa amin'ny sofina sy karan-doha. Ny loko dia misy black & tan, aty & tan, mena & tawny ary mena. Indraindray misy fotsy kely eo amin'ny tratra, ny tongotra ary ny tendron'ny vodisambo.
Ny Bloodhound dia alika tsara fanahy, manam-paharetana, mendri-kaja, malemy paika ary malala. Malemy fanahy, be fitiavana ary tsara amin'ny ankizy, tena mpiara-miasa voajanahary izy io. Olona tsara toetra ireo alika ireo ka handry ao ary hamela ny ankizy hitsaoka azy rehetra. Ity karazana ity dia tia ny fiheverana rehetra azony avy amin'izy ireo. Mba ho rariny amin'ny Bloodhound-nao, dia alao antoka fa tsy hampijaly na handratra ny alika ny zanakao, satria hipetraka any i Bloodhounds ka haka azy. Tena mahery vaika any ivelany sy be tabataba rehefa tanora, tapa-kevitra sy mahaleo tena, Bloodhounds mila mafy, fa tsy mavesatra tanana fampiofanana. Tompony mampiseho zavatra hafa a fahefana voajanahary, tony nefa hentitra hamoaka soritra faniriana. Ny tompona Bloodhound vaovao dia mila manana faharetana be ary manana fahaiza-mandanjalanja tsara ho an'ny fitarihana tsy tapaka ho an'ny fampiofanana hahomby. Fitsipika mazava mila apetraka ary arahana. Raha mampiseho ianao famantarana ny fananana tompony malemy fanahy , tsy hihaino anao ity alika ity. Aza manantena be loatra amin'ny alàlan'ny fankatoavana avy amin'ity alika ity. Izy ireo dia biby malemy fanahy voajanahary nefa tsy mora ny manofana. Raha mahare fofona zavatra iray izy ireo dia mety ho sarotra ny hamerina ny sain'izy ireo hiverina aminao raha tsy eo an-toerana ara-batana amin'izy ireo ianao. Ny lehilahy dia mandalo fahamaotiana eo anelanelan'ny taona 1 sy 2 taona. Izy ireo dia mety ho vitsy kely amin'izany fotoana izany ary ny iray dia mila maka antoka fa lasa izy ireo mpitarika fonosana mafy orina , fa aorian'ny taona 2, miaraka amin'ny fitarihana, fampiofanana, fanentanana ary tsy fitoviana mety dia hiala kely izy ireo. Mifandraisa tsara hisorohana azy ireo tsy ho saro-kenatra. Zava-dehibe tokoa io alika io alainy a fitsangatsanganana entana isan'andro . Ny rà mandriaka izay tsy ampy fanatanjahan-tena sy / na fanatanjahan-tena dia ho sarotra tantanana. Ny Bloodhound dia lasa natokana ho an'ny tompony ary mifanerasera tsara amin'ny olona. Ity alika ity dia tia ny olon-drehetra ary ny sasany hiarahaba an'ireo mpitsidika notadiavina sy tsy ilaina. Ny hafa tsy mandray ny vahiny tsy ilaina. Azon'izy ireo atao ny miaro ny sehatra misy azy ireo raha tsy misy olona ao an-trano, saingy mivoaka an-dalana izy ireo, handray an'iza izy ireo. Ny sasany hibontsina ary hampahafantatra anao rehefa misy olon-tsy fantatra. Afaka miaina mifanaraka amin'ny alika hafa sy ny biby fiompy ao an-trano izy ireo. Bloodhounds dia droolers ary manana fironana hirona sy hidradradradra. Mahatalanjona tokoa ny orony ka sarotra amin'izy ireo ny tsy mirenireny rehefa manitra manitra iray. Izy ireo koa dia mety mamofona olona amin'ny toerana heverina fa tsy mety. Na dia hitan'ny olombelona ho tsy mahalala fomba aza izy io, dia tena mianatra zavatra betsaka momba azy ny alika. Bloodhounds dia afaka manaraka ny fofona rehetra, eny fa na dia ny olombelona aza - fahaizana tsy fahita amin'ny alika. Ity karazana ity dia voalaza fa manaraka tsara ny lalan'ny mihoatra ny 100 ora. Tapa-kevitra tokoa izy fa fantatra fa hijanona amin'ny lalana 100 kilaometatra mahery. Ny Bloodhound dia toy izany a Tracker azo antoka fa ny karazany dia ampiasaina eran'izao tontolo izao ho an'ny famonjena sy fikarohana heloka bevava. Ny porofo an-dry Bloodhound dia ekena ao amin'ny tribonaly. Ny Bloodhound iray dia nitondra fisamborana sy fanamelohana olona 600. Ny rà mandriaka dia tsy azo tazonina ao an-tokotany tsy misy fefy mihitsy. Misy fahatsapana vintana mety hiteraka azy ireo hivezivezy raha miala amin'ny fehikibo. Mandositra izy ireo rehefa mahazo fofona manitra manosika azy ireo hahita ny faran'ny làlana.
Haavony: Lehilahy 25 - 27 santimetatra (63 - 69 cm) Vehivavy 23 - 25 santimetatra (58 - 63 cm)
Milanja: Lehilahy 90 - 110 pounds (41 - 50 kg) Vehivavy 80 - 100 pounds (36 - 45 kg)
Io karazana io dia mora tohina bloat . Tokony hanome sakafo kely roa na telo isan'andro ianao fa tsy iray lehibe. Aza manao fanatanjahan-tena aorian'ny sakafo. Ny sasany voan'ny kibo. Mora voan'ny dysplasia hip, maso serizy , aretin-tsofina sy entropion, izay mivadika ao anatiny ny hodi-maso. Ny fandriana vita amin'ny padded dia asaina hisorohana ny kalitaon'ny tonon-taolana.
Ny Bloodhound dia hanao tsara ao amin'ny trano iray raha ampiasaina tsara. Tsy mihetsika izy ireo ao an-trano ary manao ny tsara indrindra amin'ny tokotanin-tsaha farafahakeliny.
Bloodhounds dia tia hazakazaka tsara ary mila fanatanjahan-tena betsaka. Tokony horaisina izy ireo a dia an-tongotra lavitra isan'andro . Na izany aza, raha mahazo hanitra mahaliana izy dia mety ho sarotra aminao ny hisarika ny sainy. Manana haavon-kery tsy mampino izy ireo ary afaka mandeha an-tongotra mandritra ny ora maro. Hahafinaritra azy ireo ny mitsangatsangana miaraka aminao, saingy tadidio fa ny faniriany hanadihady izay hanitra mahaliana. Aza atao mihoatra azy ireo amin'ny diany mandra-pahalehibeny. Ny Bloodhound dia alika lehibe mitombo haingana ary mila ny heriny rehetra amin'ny fampivoarana taolana, tonon-taolana ary hozatra matanjaka.
8 - 10 eo ho eo, ny sasany dia fantatra fa manana pups hatramin'ny 15 amin'ny fako iray
Ny palitao malama sy lava volo dia mora taovolo. Milalao amin'ny fonon-tanana ary manaova raha tsy ilaina. Ny fikosehana amin'ny lamba famaohana na chamois marokoroko dia hamela ny akanjo milelalela. Diovy tsy tapaka ny sofina lava sy malefaka. Bloodhounds dia manana fofona karazan'alika. Ity karazana ity dia mpitrandraka antonony.
bichon Lhasa apso afangaro amidy
Maherin'ny arivo taona ity karazany ity. Natao tonga lafatra izy io fa tsy noforonin'ny moanin'i St. Hubert any Belzika. Taty aoriana dia naterin'ireo Norman ho any Angletera ireo alika ireo ary avy eo nankany Etazonia. Fantatra ihany koa amin'ny hoe Flemish Hound. Manerana an'izao tontolo izao, ny karazana toy ny American Coonhounds, Swiss Jura Hounds, Brezila Fila Brasileiro , Tendrombohitra Mountain Mountain , ary maro hafa no manohy ny razamben'izy ireo niverina tamin'ity tracker fofona taloha ity. Androany, ny Bloodhounds rehetra dia mainty sy mainty na mena, fa tamin'ny Moyen Âge dia miloko miloko izy ireo. Ny karazany fotsy, izay nisy tany Eropa antenantenany, dia nantsoina hoe Talbot Hound ary tonga lany tamingana tamin'ny 1600, fa nandray anjara tamin'ny fampandrosoana ny karazany maro hafa anisan'izany ny fotsy Boxers SY Basset Hounds miloko tri . Ny Bloodhound dia miroborobo amin'ny fihazana fa tsy ny famonoana. Tena mila fahafinaretana lehibe amin'ny fanarahan-dia ary ampiasaina hihaza biby, mpanao heloka bevava, andevo mandositra ary zaza very. Androany, ity karazan-tsoa miadana sy manankarena ity dia samy Tracker sy mpiara-mitory. Na dia manana toetra mahafinaritra aza izy io, dia tsy mora ny manofana fiaran-dalamby, azo inoana fa noho ny fanelingelenana ny baikon'ny olombelona, ​​ny fahalianana bebe kokoa amin'ireo fofona mahery rehetra manodidina azy.
'Ity no Bloodhound Flash-ko. Mahita Flash mitsofoka any amin'ny fanaka foana foana aho. Ataoko eo amin'ny fandriany alika foana izy, saingy aleony tsy matory eo amin'izy ireo. Nalaiko ireto sary ireto hanaporofoana fa tsy izaho no mahazo loto amin'ny fanaka. '
Atsofohy amin'ny sofa ny Bloodhound
Atsofohy amin'ny fandriana ny Bloodhound
Atsofohy amin'ny sisin-tany ny Bloodhound
Alika kely, ao ve ianao? Alika kely natao ho an'ny fararano 2000, sary natolotr'i MistyTrails Bloodhounds
Sary natolotry ny MistyTrails Bloodhounds
Big Red mandritra ny herinandro 7½, sary natolotry ny MistyTrails Bloodhounds
Jereo ohatra misimisy kokoa momba ny Bloodhound
Sary Bloodhound 1
Sary Bloodhound 2
Sary Bloodhound 3
Sary Bloodhound 4
Sary Bloodhound 5
Sary Bloodhound 6
Sary Bloodhound 7
Alika Bloodhound: sary an-tsokosoko voaangona
6 volana Amerikana bulldog
olo-masina mainty sy fotsy bernard
jack russell cocker spaniel mifangaro